Nhau - Nzira mbiri dzepamusoro dzekugadzira logo pazvigadzirwa zvemushenjere
Wepamusoro 3 nzira dzekugadzira logo pazvigadzirwa zvemushenjere
Vazhinji vanhu vanofarira kugadzira tsika logo / mhando kana pateni pane zvigadzirwa zvavo, nzira ngani dzaunoziva kuti uzviite pamishenjere uye zvigadzirwa zvemuti? Ndezvipi zvakanaka zvigadzirwa zvako? Verenga pamusoro kuti upedze kunetseka kwako.
Kune nzira nhatu dzinoshandiswa zvakanyanya kune bamboo nehuni zvinhu.
1) Chitambi chinopisa / chakatsva
Iyo inofanirwa kugadzira simbi muforoma yeiyo logo uye wozo shandiswa nemagetsi inopisa kupisa muchina. Iyo inopisa yekutsika logo iri pachena, asi iro iro rakangosviba rima, uye kune zvishoma chromatic aberration nekuda kwehuwandu hwehuwandu hweumwe neumwe bango kana chinhu chehuni. Kazhinji, iyi nzira inoshandiswa kune diki saizi logo. Inogona kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakaumbwa, asi fekitori zhinji yaishandisa pazvinhu zvakagadzirwa.
2) Laser achiita zvokutemera
Inoshandiswa nemuchina wakavezwa nemuchina zvakananga, hapana chikonzero chekuumbwa, kungogadzirisa iyo logo faira nekombuta, saka nzira iyi iri nyore, uye logo iri yakajeka (iri pachena kupfuura inopisa yakadhinda logo) uye isiri nyore kubvisa. Kunge logo yakatsva, ruvara rwacho nderwega bhuruu uyezve kune chromatic aberration diki nekuda kwehukuru hweumwe neumwe bango kana chinhu chehuni, chinonyanya kushandiswa kune diki saizi logo (haisi hupfumi hwehukuru hukuru logo neiyi nzira) uye inogona kuve yezvinhu zvakasiyana zvakaumbwa. Iyo inoshandiswa nguva uye mutengo ne laser engraing ingori inopfuura inopisa stamp logo.
3) Silk chinovhara kudhinda
Iyo yakadhindwa neinki, inogona kugadzira akasiyana mavara logo, asi inonyanyoshandiswa pazvinhu zvakapfava, uye zvakanaka kune yakakura saizi kudhinda.
Post nguva: Jun-01-2021